समाचार - कस्तो प्रकारको सनग्लास तपाई भविष्यको लागि लगाउन चाहानुहुन्छ?
एक पटक, हामी सबैले चश्मा लगाएका ठूला केटीहरू डरलाग्दो महसुस गरिरहेको महसुस गर्‍यौं, सुस्त र हँसीको अभाव महसुस गरें। यद्यपि, भर्खरका वर्षहरूमा धेरै प्रमुख फ्लाईओभर ब्रान्डले उनीहरूलाई समर्थन गरेको छ, र सबैले मन नपराउने चश्मा अचानक फेसन आईटमहरू भयो र नयाँ प्रवृत्ति भयो।
चार आँखाका केटीहरू केवल कार्यक्षमतामा केन्द्रित चश्मा लगाउँदछन्, तर अब तिनीहरू शैली डिजाइनमा बढी केन्द्रित भएको छ। तिनीहरू दैनिक शैलीहरू मिलाउन घरमा विभिन्न चश्माहरू पनि लैजान्छन्।
यो गिक ठाठो प्रवृत्ति २०१ to देखि २०२० सम्ममा ल्याइएको छ। जब तपाईले त्यो गुच्ची देख्नुभयो, प्रादा, फेन्डी, क्लोइ, र चनेलसमेत सहयोग गर्दै छन्, म विश्वास गर्दछु कि सपाट चश्माको यो प्रवृत्ति वास्तवमै रोकिरहेको छ।
वास्तवमा, जबसम्म सामानहरू राम्रोसँग छानिएका हुन्छन्, यो स्वाभाविक रूपमा देखिने बिन्दुहरू थप गर्दछ। तसर्थ, एक फैशनेबल केटी को रूप मा, तपाईं पहिले आफ्नो लागि उपयुक्त फ्रेम छनौट गर्न सिक्नु पर्छ।
यदि मानव विज्ञान उपन्यास "थ्री-बॉडी" मा हाइबरनेसन टेक्नोलोजी महसुस गर्न सक्दछ भने, तपाई कस्तो प्रकारको सनग्लास भविष्यमा लगाउन चाहानुहुन्छ?
भविष्यमा कस्तो प्रकारको सनग्लास अपरंपरागत हुनेछ, सधैं प्रवृत्ति अग्रणी, समय भन्दा परे पनि?
हालसालै, त्यहाँ दुई उत्कृष्ट विज्ञान कथा फिल्महरू छन्, "ब्लेड रनर २०ner" "र" रेडी प्लेयर वन "। दुबै फिल्महरूले "भविष्यको संसार" लाई वर्णन गर्दछन्, तर भविष्यको दुई फिल्महरूमा चित्रित गरिएको बिल्कुलै भिन्न छ। को
"रेडी प्लेयर वन" को संसारमा, मानव पूर्णरुपले उच्च-अन्त VR ले ल्याएको चरम अनुभवमा निर्भर छ।
"ब्लेड रनर २० 49" "मा विश्व मादक र उजाड छ, र सर्वशक्तिमान प्रविधिले मानव एकाकीपनलाई गहिरो पारेको छ। सब भन्दा भविष्यका सनग्लासहरू हामी तपाईंलाई परिचय दिन्छौं, अवान्त-गार्डे यसको विशेषता हो।
साइबरपंकको फिल्म र टेलिभिजन कार्यहरूमा, भविष्यको संसार प्राय: चकनाचूर हुन्छ। भविष्यमा गगनचुम्बी भवन र तीन-आयामिक हुनको लागि सहरमा, त्यहाँ स streets्ख्याले भरिएको साँघुरो सडकहरूमा बसोबास गर्ने निम्न स्तरका बासिन्दाहरू र सामाजिक सीमानाको एक ठूलो संख्या पनि छ। उन्नत टेक्नोलोजी, भव्य नियोन बत्ती र साना व्यक्तिहरू, नाजुक प्रेम, घृणा र घृणा तीव्र विरोधाभासमा छन्।
सुन्दर रंगहरू साइबरपunk्कको अपरिहार्य तत्व हुन्। चिसो टेक्नोलोजीको अनुहारमा, र्गहरूले मानवको नाजुक र समृद्ध भावनाहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछ। DLL5333 मा उत्तम धातु फ्रेमहरू र भव्य बैजनी रin्गित लेन्सहरू छन्, र राम्रा र colorsहरू अविस्मरणीय छन्।
Cat० को दशकको रेट्रो स्वादको साथ ठूलो बिरालो चश्मा फ्रेम फेरि फिर्ता भयो। चंचल र रमणीय भावनाको थपमा, बिराला चश्माको रूपरेखा परिमार्जनको प्रभाव छ। स्टेला एमकार्टनी तारा बान्कीले अझ बढी सुशोभित छ। डिजाईन एकदम आँखा लाग्ने छ र निश्चित रूपमा आकारमा हाइलाइट हुन सक्छ। यदि तपाइँ मोनोक्रोमेटिक चश्मा धेरै सामान्य लाग्छ भने, तपाइँ कछुवा चश्माहरू छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। Tortoisehell चश्मा सँधै धनी बनावट को विकल्प भएको छ, तर यो कलात्मक स्वभावलाई हाइलाइट गर्न सक्दछ। जर्मन डिजाइनर वोल्फग्या pro प्रोक्शको समान नामको चश्माले विभिन्न सामग्रीहरू मिसाउँदछ, कारमेल कछुए शेल बनावट फ्रेम र धातु बाहुहरूसँग। फ्रेम डिजाइन त्रि-आयामिकतामा धनी छ, जुन मायोपियाको साथ फेसन योग्य केटीहरूका लागि एकदम उपयुक्त छ।
केटी को रूपमा जो सुन्दरता मन पराउछ, कार्यक्षमता बाहेक, चश्मा पनि जब धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ चश्मा किन्नु भयो, हैन? यदि तपाईं सहमत हुनुहुन्छ भने, तब यी सजावटी डिजाइन फ्रेमहरू तपाईंको लागि मात्र हुन्! लन्डनबाट आर्टवेयरको ब्रान्ड कलाको लागि सधैं चश्मामा केन्द्रित छ जुन दुबै फेसनल र कलात्मक छ। यस पातलो बिरालो आँखा धातु फ्रेम बायाँ र दायाँ पट्टि तीन मोती संग सजाइएको छ, र शैली धेरै नाजुक छ। कलाको खातिर, यो मौसममा अलेक्ज्याण्डर म्याक्युवीन, गुच्ची, क्लो र अन्य ब्रान्डले विभिन्न सजावट डिजाइन फ्रेमहरू पनि आरम्भ गर्‍यो,
उड्डयन चश्माको जन्म वास्तवमै पाइलटसँग सम्बन्धित छ। यो गग्गलहरू स्ट्राटोस्फीयर बिरूद्ध पाइलटहरूको लागि बाउश र लम्ब कम्पनीले डिजाइन गरेको हो। यो एक अश्रु आकार को डिजाइन अपनाउँछ र हल्का धातु फ्रेम बाट बनेको छ। बिराला चश्मा फ्रेमको माथिल्लो डिजाइनको विपरीत, एभिएटर चश्माको लेन्स दुबै तिर drooping डिजाइन छ, जो मान्छे अनुहार को तल्लो आधा मा ध्यान केन्द्रित गर्दछ। तसर्थ, यो तीखो चिनो भएका केटीहरूको लागि पनि उपयुक्त छ, र छोटो र चौडा अनुहार भएका व्यक्तिहरूले उनीहरूको उत्तम बेवास्ता गर्न प्रयास गर्नुपर्छ।